एपीएफ भर्सेस अार्मी : काे बन्ला च्याम्पियन? | Suvadin !
साताैं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियाेगिता अन्तर्गत पुरूष क्रिकेटतर्फकाे फाइनल खेल शुक्रबार हुँदैछ। मोरङ बैजनाथपुर खेलमैदानमा हुने प्रतिस्पर्धामा फाइनल पुगेका दुई विभागीय टाेलीहरू सशस्त्र प्रहरी बल(एपीएफ) र त्रिभुवन अार्मी क्लब स्वर्णका लागि अामनेसामने हुनेछन्। राष्ट्रिय खेलाडीहरूले भरिएका दुबै टिम निकै प्रतिस्पर्धी मानिन्छन्। २० अाेभरकाे प्रतियाेगिता दिउँसाे १ बजे सुरू हुनेछ।
Dec 30, 2016 08:09
माथिल्लाे फाेटाेमा एपीएफ र तल्लाे फाेटाेमा नेपाल अार्मी टिम।
प्रतियाेगितामा फाइनल पुग्ने पहिलाे टाेली एपीएफ हाे। ग्रुप ए मा रहेकाे एपीएफले पहिलाे खेलमा मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रलाई २६ रनले पराजित गर्याे। सुदुरपश्चिमलाई दाेस्राे खेलमा १ सय ४४ रनकाे फराकिलाे अन्तरले पराजित गरेकाे एपीएफले तेस्राे खेलमा त्रिभुवन अार्मी क्लबमाथि २८ रनकाे जित निकालेर समूह बिजेता बन्दै एपीएफ सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेकाे थियाे। समूह चरणका तीनवटै खेल जित्दै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेकाे एपीएफले मध्यमाञ्चललाई ८ विकेटकाे फराकिलाे जित निकाल्दै फाइनल यात्रा तय गरेकाे हाे।
यता अार्मी भने समूह चरणका तीनमध्ये २ खेल जित्दै समूह उपबिजेताका रूपमा सेमिफाइनल प्रवेश गरेकाे थियाे। पहिलाे खेलमा अार्मी तेस्राे खेलमा भने एपीएफसँग २८ रनले पराजित बन्दै स्तब्ध बन्याे। पहिलाे खेलमा सुदूरपश्चिमलाई ८७ रन र दाेस्राे खेलमा मध्यपश्चिमाञ्चललाई ३० रनले पराजित गरेकाे अार्मी अन्तिम खेलमा भने एपीएफसँग पराजित बन्याे। तर पनि समूह ए काे उपबिजेताका रूपमा सेमिफाइनल प्रवेश गरेकाे अार्मीले त्यहाँ नेपाल पुलिस क्लबमाथि ८ विकेटकाे फराकिलाे जित निकाल्दै बलियाे दाबेदारी प्रस्तुत गरेकाे छ।
जारी साताैं राष्ट्रिय प्रतियाेगितामा एपीएफ र अार्मी समूह चरणमा एकपटक अामनेसामने भएका छन्। समूह चरणकाे तेस्राे खेले खेल्ने क्रममा दुबै टाेलीकाे भेट भएकाे थियाे। प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा एपीएफले बाजी मार्याे। एपीएफले अार्मीलाई २८ रनले पराजित गरेकाे थियाे। त्यसपछि यी दुईबीच अाज फाइनलमा दाेस्राे भिड्न्त हुँदैछ। समूह चरणमा एपीएफ बलियाे देखिए पनि अार्मी उसकाे भम्र ताेड्ने दाउमा हुनेछ भने एपीएफ अाफ्नाे जितकाे विरासत कायम राख्ने हाेडमा देखिनेछ।
राष्ट्रिय टाेलीका कप्तान समेत रहेका पारस खड्का फाइनलमा सबैकाे नजरमा हुनेछन्। एपीएफलाई प्रतियाेगितामा अपराजित राख्न उनकाे भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ। पहिलाे खेलमा मध्यपश्चिमाञ्चलविरूद्ध २६ रनकाे इनिङ खेलेका पारसले ३ विकेट पनि लिएका थिए।
त्यस्तै, दाेस्राेमा सुदुरपश्चिमविरूद्धकाे खेलमा शतकीय पारी खेल्दै अार्मीलाई शानदार जित दिलाए। ४३ बलमा १ सय ५ रनकाे इनिङ खेलेका पारसले ९ चाैका र ८ छक्का प्रहार गरेका थिए। समूह चरणकाे अार्मीविरूद्धकाे अन्तिम खेलमा पनि उनकाे ब्याट राेकिएन। साे खेलमा उनले २० रनकाे याेगदान गरे।
प्रतियाेगितामा पारस उत्कृष्ट लयमा देखिन्छ। लामाे अनुभव, अात्मविश्वास र कुशल कप्तानी क्षमता उनका सबल पक्ष हुन्। अार्मीले उनलाई राेक्न नसकेकाे खण्डमा उनी एक्लै खेल जिताउने सामर्थ राख्दछन्। त्यस्तै, एपीएफका सुवाश खकुरेल, शक्ति गाैचन, बसन्त रेग्मी तथा युवा क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने फाइनलमा सबैकाे नजरमा हुनेछन्।
अार्मीकाे मेरूदण्ड हुन्, कप्तान तथा विस्फाेटक ब्याट्सम्यान विनाेद भण्डारी। प्रतियाेगितामा उनी राम्राे लयमा छन्। सुदूरपश्चिमविरूद्धकाे पहिलाे खेलमा ३४ रनकाे पारी खेलेका उनले मध्यपश्चिमविरूद्ध खेलेकाे २३ बलमा ६७ रनकाे इनिङ निकै चर्चामा अायाे। टीमलाई जिताउने क्रममा उनले अन्तिम अाेभरमा लगातार ५ छक्का प्रहार गरेका थिए। फाइनलमा पनि अाफ्नाे विस्फाेटक रूप देखाएमा अार्मीका बलरहरूलाई स्तब्ध पार्न उनी कुनै कसुर बाकीं राख्ने छैनन्।
अार्मीका नरेश बुढाएेर, राजु रिजाल, साेमपाल कामी सागर पुन उत्कृष्ट लयमा छन्। यति मात्र खेलाडी चल्ने हाे भने अार्मीले स्वर्ण अाफ्नाे पाेल्टामा पार्न सक्छ।
एपीएफ : सुवाश खकुरेल, अाशिफ सेख, पृथु बास्काेटा, प्रदीप एेरी, करण केसी, पारस खड्का (कप्तान), ज्ञानेन्द्र मल्ल, भुवन कार्की, शक्ति गाैचन, बसन्त रेग्मी, सन्दीप लामिछाने, यज्ञमान कुमाल।
अार्मी : सागर पुन, अनिल मण्डल, नरेश बुढाएेर, राहुल विक, राजेश पुलामी, विनाेद भण्डारी(कप्तान) , राजु रिजाल, साेमपाल कामी, विक्रम साेब, चन्द्र सावद, अविनाश कर्ण।